Radio Don Bosco - Na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa
Ny hafa no mety ho voafitaka amin'ny fomba firesaka, ny tena no mety ho voafitaka amin'ny atao, fa Andriamanitra tsy ho voafitaka velively mandrakizay. Satria mana-maso Andriamanitra ka mahita, ary manan-tsofina Izy ka mandre, izany hoe, hitan'Andriamanitra amin'ny antsipiriany ny fianantsika zanak'olombelona tsirairay avy, hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra tsy misy miafina eo anatrehany. Hoy i Jesoa hoe : "Tandremo, sao azon'ny lalivain'ny Farisianina ianareo". Izay lalivay izay dia tsy inona fa ny fihatsaram-belatsihy. Tsy misy te ho ratsy eo imason'ny hafa izany, dia tapenana sy afenina foana ny kilema maha olombelona.
Ry kristianina havana, ny sitrapon'Andriamanitra katsahana sy tanterahana isan'andro. Tsarovy fa isika dia zava-boaary, ari-tanan'Andriamanitra. Bitika sy marefo ary tsinontsiona, tsy mahavita tena toy ny fody, ka mila miantehitra mandrakariva amin'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Araka izay efa traik'efam-piainana ananantsika tsirairay, dia azo lazaina fa tsy misy mahavita miankina amin'ny tenany samirery ny olona, fa tsy maintsy miankina amin'Izy Andriamanitra Ray. Izany no midika fa tsy lavoray isika ary tsy mahavita tena. Jesoa ô, Ianao ihany no efa nilaza fa : "Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana", koa ampio aho, tantano am-pitivana Jesoa ô, fa raha ny heriko ihany dia ho kivy an-dalana aho. Hanatontosa ny irakao no mamiko, fa omaly sy anio ary mandrakizay, tsy miova Ianao, Jesoa ô. Amen.